1- Ireo tany matevina 10 km ireo dia misaratsaraka ao ambany ao, ary mifanosika eo ambon'ilay ranoka mangotraka. Rehefa mifanosika izy dia misy no miakatra ambony, dia manome ireny tendrombohitra ireny, misy kosa no tsy mahazaka izay tsindry mifanosika izay ka tapaka, izay manome ilay hoe faille. Hitatsika ireny tendrombohitra mahitsy be nefa mizara roa mazava, ny iray ety ambony, ny hantsana ambiny latsaka ety ambany.
Rehefa tapaka io tany nifanosika io dia manome hantsana be, mety misy ny hantsana tazana ety ambony tany, misy kosa any ambany any ihany, na anaty ranomasina. Mihovotra izany io tany tapaka roa na maromaro io ka dia manome ny Horohorontany.
Tsy misy hafa amin'ireny isika mifanena amin'ny camion ireny, misy rivotra mitsoka ary misintona ihany koa, mety zakany mihitsy ny fiara na ny olona mifanena aminy. Dia misy onde ohatr'izay ihany koa rehefa mitritra ilay tany, ka manozongozona ny tany rehetra manodidina azy.
Epicentre no anaran'ilay toerana aty ambony niaingan'ilay tany nihetsika. Foyer kosa no anaran'ilay ao ambany tany mifanitsy aminy.
2- Io ranoka mangotraka ao anaty tany io dia mety te hitroatra hivoaka ihany koa, toy ireny cocotte minute ireny, rehefa tena mangotraka izy dia te hivoaka, ka manosika ny tany mandrakotra azy eo ambony ka te hivoaka, mamaky sy mitady lalana izy, ka ao ny mipoaka toy ireny champagne ireny, rehefa tsy mahatana azy intsony ny bouchon dia mipiritra mivoaka ety ivelany izy, io no antsoina hoe Volcan. Mety tsy tafavoaka ety ivelany izy dia mangatsiaka dia tavela lasa tendrombohitra fotsiny, ohatra maro ireny hitatsika any Itasy ireny. Misy kosa no tafavoaka fa tsy manana tanjaka mahery intsony dia mitsiranoka fotsiny, dia manome ireny tany sy vato mainty misy lavadavaka fanao amin'ny WC ireny. Mamokatra be ny tany amin'io. Soavinandriana rehetra iny.
Misy kosa no tafavoaka ka manome lavaka be na cratère, toy ireny Tritriva sy Betafo ireny.
Feno ranon'orana izy ireny avy eo dia lasa Lac lehibe.
Ny ranomafana ao Antsirabe sy ny ranovisy izao dia mbola mifandray amin'ny ranoka mangotraka ao ambany ao ka dia manome iny hafanana iny hatrany. Ilaina amin'ny fahasalamana iny. Azo amokarana hafanana sy herin'aratra ihany koa, géothermie.
Mahalana anefa izany hoe nisy fahavakisan'ny tany, na faille, izay niteraka horohorontany ka ampihetsika Volcan. Zavatra roa samihafa na mifandray aza ny fipoahan'ny Volcan sy ny horohorotany.
Ny horohorotany kosa mety misy fiverenany, na réplique aorian'ilay voalohany, mety ho mafy kokoa fa matetika dia mihena ny heriny.
Tsy tokony atahotra izany isika hoe nisy horohorontany ka hisy volcan hipoaka.
Ny Volcan dia tsy mamely tampoka izany satria izy miakatra tsikelikely.
Tsy afaka fantarina mialoha kosa ny horohorontany, na dia efa fantatra aza ny faritra misy faille mety hihetsika. Fanarahamaso ny faritra mety misy ireny faille ireny no azo atao.
Misy horohorontany 100 000 isan-taona eran'izao tontolo izao fa misy ny tsy rentsika ety ambony.
Ny horohorotany any ambany ranomasina dia mety miteraka fihetsehan'ny ranomasina ka manome ireny Tsunami ireny. Toy ny hoe manana koveta be misy rano isika ka raha hontsaninao ilay koveta dia hanonja be ny rano ao anatiny.
Misy fandrefesana azy ny herin'io Horohorontany io, izay ilay maridrefy Richter, ka ny 1 no ambany indrindra, ary 9 no farany mafy, izay mamotika tanteraka ny manodidina azy efa kilometatra maro mihitsy.
Mihamahery 10 avo heny ny herin'ilay niveau. Ka ny niveau 5, toy ny hita tany Antsirabe io no anisan'ny efa mafy, fetra farany ahabetsaka ny zavatra simba, niveau 6, manana hery manimba 10 avo heny noho ny niveau 5, ny niveau 7 izany manimba 100 avo heny, ny niveau 8, 1000 heny, ary ny niveau 9, mandravarava tanteraka.
Inona ny famantarana ivelany momba ny herin'ny horohorontany?
Ny alika dia manana fahafahana manokana, flair, mamantatra ireny onde ireny na dia alavitra aza, ka mivovo manome famantarana ny alika. Indraindray dia vaky mandositra mihitsy izy ary mahavita manapaka tady.
Magnitude 1 : Fihetsehana mora tsy re fa hitan'ny fitaovam-pandrefesana, 8000 isan'andro no misy an'io maneran-tany.
Magnitude 2: Mbola tsy re afatsy ny olona matoritory any amin'ny rihina ambony, hitan'ny fitaovam-pandrefesana, 1000 isan'andro.
Magnitude 3: Efa ren'olombelona fa tsy misy fahasimbana, olona ao an-trano no mahita azy, mety misy fihetsehana kely ny entana, toy ireny misy camion maivana mandalo ireny, 50 000 isan-taona.
Magnitude 4: Efa miozongozona ny entana ao an-trano, fa mbola tsy misy fahasimbana betsaka, toy ireny misy camion mavesatra mandalo ireny: 6000 isan-taona
Magnitude 5: Ohatr'ilay tany Antsirabe, fahasimbana ho an'ireo trano nahorina tsy nanaraka fenitra na trano efa antitra, na trano tsy ampy fikarakarana, mikoropaka avokoa ny olona, ny alika efa mitabataba, ny entana mihetsika avokoa, ny varavarana sy ny varavarakely mihovotrovotra avokoa, ny tableau mihantona mikatrokatroka amin'ny rindrina, ny latabatra mety mianjera, toy ireny misy fiarabe mandona ny trano ireny, taitra ireo matory, 800 isan-taona.
Magnitude 6: Manimba ireo fotodrafitrasa maherin'ny 180km miala ny épicentre, potika daholo ireo manodidina ny épicentre, mianjera ny olona eny andalana, maneno ny lakolosim-piangonana, mianjera ny entana rehetra, vaky sy triatra ny arabe, mihotsaka ny tany antendrombohitra, 120 isa-taona.
Magnitude 7: Manimba ireo fotodrafitrasa rehetra miala kilometatra maro manodidina ny épicentre, potika daholo ireo manodidina ny épicentre, 18 isa-taona.
Magnitude 8: Manimba ireo fotodrafitrasa maherin'ny 100km miala ny épicentre, potika daholo ireo manodidina ny épicentre ka hatramin'ny 10Km manodidina, 1 isa-taona.
Magnitude 9: Manimba ireo fotodrafitrasa maherin'ny 1000km miala ny épicentre, potika daholo ireo manodidina ny épicentre hatramin'ny 100km, 1-5 isaky ny taonjato (par siècle).
easy payday loans no credit check loans online same day loans bad credit [url=https://shorttermloans.us.com]low doc loans[/url]
samedi, 02 décembre 2017 10:59
poor credit personal loans personal loans for bad credit personal loans bad credit [url=https://badcreditpersonalloans.us.com]payday loans bad credit[/url]
how to get a secured loan with bad credit payday loans for bad credit texas personal online loans [url=https://badcreditpersonalloans.us.com]payday loans bad credit online[/url]
samedi, 11 novembre 2017 15:05
hair massager [url=https://tr.pinterest.com/aheadmass/] hair massager[/url] scalp massager https://www.youtube.com/watch?v=Lte7oMr9uCg
jeudi, 09 novembre 2017 04:42
bad credit personal loans nyc payday loans for bad credit in pa interest rates on personal loans [url=https://badcreditpersonalloans.us.com]bad credit personal loans guaranteed[/url]
jeudi, 02 novembre 2017 20:02
Generic Cipro Name Ed Drugs Online From Canada [url=http://realviaonline.com]viagra online[/url] Fluoxetine Where To Purchase Get Viagara Online Get Isotretinoin Mastercard Accepted Discount Fedex Shipping Price
dimanche, 08 octobre 2017 20:22
10 top loan companies loans payday [url=https://loansforbadcredit.us.com/]payday loans for bad credit[/url]
dimanche, 08 octobre 2017 17:20
Prix Viagra France Buy Kamagra Online Next Day Delivery [url=http://genericcial.com ]cialis[/url] Strep Treatment With Amoxicillin Cialis E Effetti Collaterali Amoxicillin With Breast Feeding
mardi, 26 septembre 2017 15:35